Taliyaha NISA oo qorsho culus u tegay dalka Qatar - Awdinle Online
Wafdi uu hoggaaminaayo Taliyaha Nabad Sugidda iyo Sirdoonka Qaranka uuna ku weliyo Teliyaha Hogaanka Dabagalka Siyaasiyiinta ayaa gaarey Magaalada Dooxa ee Dalka Qatar.
Ilo wareedyo lagu kalsoon karo ayaa sheegey in Taliyaha NISA iyo Taliyaha Hoggaanka Dabagalku ay halkaasi kulamo muhiim ah kula qaateen Madaxda Sare ee Dalkaasi ayada oo la sheegey in ay kawada hadleen doorshada fooda inagu soo haysa.
Saraakiil ku dhow dhow Taliyaha NISA oo magacooda ka gaabsadey ayaa sheegay in maalintii Arbacada uu gaaray Dalka Qatar, Taliyaha NISA oo uu wehliyo Taliyaha Hoggaanka Dabagalka Siyaasiyiinta.
Warar Hoose ayaa sheegaya in safarkan u jeedkisa uu yahay sidii Taliyaha hoggaanka dabagalka NISA Cabdullaahi Dheere uu u laba jibaari lahaa Cadaadinta Siyaasiyiinta Xildoonka ah isla markaana u dardargelin lahaa ololaha lagu soo saarayo xildhibaanada cusub la soo xulidoono.
Taliyaha Hoggaanka Dabagalka ayaa la sheegey in uu heesto dhalasho Qatar, waxaana la aamin san yahay in uu kamid yahay shaqsiyaadka aadka ula shaqeeya Fahad Yaasiin.
Safarka madaxdaan ayaa lasheegey in uu qaadan doono maalmo ayaga oo xooga saari doona sidii doorashada soo socota Guul ugu keeni lahaayeen.
Previous articleCiidamada Dowladda & kuwa Kenya oo xaduudka ku dagaalamay
Next articleCiidanka dowladda oo 40 Carruur ah si xoog ah uga soo furtay Al-Shabaab